सतर्कता अनुगमन स्थानीय तहमा केन्द्रित | suryakhabar.com
काङ्ग्रेसका नेता एवं पूर्वमन्त्री जोशीद्वारा वीर अस्पतालमा ‘गजेन्द्र स्मृति कोष’ स्थापना
सरकारले वन क्षेत्रलाई समृद्धिको आधार बनाउन विविध कार्यक्रम अघि बढाएको छः मन्त्री बस्नेत
सरकारको एक वर्ष, सङ्घीयता कार्यन्वयनमा सफलता
बल्ल प्रदेशस्तरका ठूला आयोजना कार्यान्वयन हुने अवस्थामा पुगेः मुख्यमन्त्री पोख्रेल
ओली सरकार जनताका काम गर्न पूर्णतः असफल – डा. भट्टराई
Home पु.समाचार समाचार सतर्कता अनुगमन स्थानीय तहमा केन्द्रित
सतर्कता अनुगमन स्थानीय तहमा केन्द्रित
on: September 27, 2018 In: समाचारTags: No Comments
काठमाडौँ । राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले स्थानीय तहमा अनुगमनलाई केन्द्रित गरेको छ । स्थानीय तहमा सर्वसाधारणको काम अघि बढेकाले अनुगमनलाई केन्द्रित गरिएको केन्द्रका सहसचिव विष्णुराज लामिछानेले जानकारी दिए। स्थानीय तहको काम कारवाहीमा गुनासोसमेत बढेकाले अनुगमनलाई केन्द्रित गरिएको हो ।
केन्द्रले पहिलो चरणमा १४ वटा स्थानीय तहको अनुगमन शुरु गरेको छ । ती १४ स्थानीय तहमा सात समूह बनाई केन्द्रले अनुगमन गरेको छ । “जिल्लास्थित कार्यालयभन्दा स्थानीय तहमा सेवाग्राहीका काम बढेको छ” उनले भने, “त्यही भएर जनताका काम स्थानीय तहले कसरी गरेका छन् भनेर अनुगमन केन्द्रित गरेका हौँ ।” पहिले केन्द्रले जिल्लास्थित कार्यालयमा अनुगमन गर्ने गर्दथ्यो ।
अनुगमन टोलीले कार्यालयको छड्के निरीक्षक गर्ने, पोशाक लगाउने, सेवाग्राहीसँग सेवा प्रवाहबारे सोधपुछ गर्ने र नागरिक वडापत्रअनुसार काम भएको छ कि छैन भनेर अनुगमन गर्ने छ । केन्द्रले गत आर्थिक वर्षमा ५४ जिल्लाका एक हजार १०२ कार्यालयको अनुगमन गरेको थियो । भ्रष्टाचार, विकासमा लापर्वाही, घुस मागेको सम्बन्धमा साउन यता ३१८ वटा उजुरी आएको प्रवक्ता लामिछानेले जानकारी गराए । त्यसमा धेरै उजुरी स्थानीय तहका छन् ।
नेता नेपालको प्रश्नः नेपालमा के हुदैँछ, सरकार कहाँ छ ?
निर्मलाको हत्यारालाई छिट्टै हतकडी लगाईन्छ, विश्वस्त हुनुसः गृहमन्त्री थापा
थप नौ जिल्लामा बीमा कार्यक्रम सञ्चालन हुँदै
महायज्ञमा दुई करोड सङ्कलन
काश्मिरमा आक्रमण ३७ को मृत्यु
काश्मिर आक्रमणको ठूलो मूल्य चुकाउनु पर्छ – भारतीय प्रधानमन्त्री
देखासिकीमै हराउन थाले, थारु समुदायको वैवाहिक मौलिकता